Waa maxay habka saxda ah ee loo qoro faallooyinka blogka ee dib u eegista?
Inta badan, marka ay timaado geeddi-socodka Mashruuca Optimization (SEO) ee miisaanka, dad aad u badan ayaa isku wareersan ama laga yaabo inay xitaa wareeraan iyagoo abuuraya muuqaal gadaal muuqaal ah oo loogu talagalay boggooda ama blogkooda. Laakiin waa maxay dhibaatada? Waxyaabahaasi waa dib-u-dhiska dib-u-dhiska iyo kasbashada - dhab ahaantii laba waxyaalood oo kala duwan. Dhismayaasha dib u dhisku macnihiisu waa abuurista ama iibsashada kaliya ujeedooyinka SEO. Ugu dambeyntii - waxaad u baahan tahay iyaga si aad u heshid 10ka natiijo raadinta ee Google. Dhanka kale, si kastaba ha ahaatee, dib u soo celinta dhabarka waxay ka dhigan tahay inaad xaqiiqdii u qalanto. Maalgashi maalgelin ah iyo dadaal wax lagu qoro faallooyin blog ah oo loogu talagalay taageerooyinka dhabta ah waa xaqiiqo ahaan waxa u taagan si aad u heshid kuwa u qalantaa. Taasi waa sababta aad u ogaatid sida loo qaabeeyo faallooyinka blogka saxda ah ee dhabarka kaas oo run ahaantii u shaqeeya hagaajinta dadaalkaaga SEO ee miisaanka. Sidaas, maxay ka dhigaysaa faallooyinka blogka ee 'fekerka' ah ee 'ku kasbaday' inta badan HQ backlinks leh PageRank badan oo suurtagal ah? Aan eegno!
Laakiin ka hor intaanaan billaabin, aynu wajahno - dib u soo celinta dhabarka waxa loola jeedaa inaad tahay qof si xoogan loo adeegsado. Laga soo bilaabo aragtida SEO, haddii aad sameysid boggaan ku faraxsan, waxaad sidoo kale macaamiisha Google ka fili kartaa sidoo kale. Waxaan ula jeedaa inaan loo baahnayn inaad waqti badan ku bixiso raadinta wixii cillado ah ama khiyaamo si aad u khiyaameeyaan ama wax uga qabtaan algorithm search major. Waxaan jeclaan lahaa inaan dib u soo celiyo waqtigayga, laakiin waad ka fiicnaan laheyd inaad bixiso - haddii aad rabto inaad dhisato ganacsi dhab ah oo soo saara dakhliga dhabta ah, waa inaad xoogga saartaa dadaalkaaga ku farxaya isticmaalaha. Dhab ahaantii, iyaga oo dhan ku farxaya in ay si joogta ah ugu raaxaystaan ​​waxay mid waliba ku noqon kartaa kaaliyeyaasha yar yar ee suuq-geynta suuq-geynta - dadka isticmaala faraxsan ayaa doonaya in ay ku kasbadaan dib-u-celin dheeraad ah, wadaagaan macluumaadkaaga shabakadda, waxayna u badan tahay inay dib u noqdaan oo noqdaan iibsadayaasha dhabta ah oo dhan ka dib.
Ku noqosho dhibta - waa maxay habka saxda ah ee loo helo faallooyin wanaagsan oo blog ah - dhab ahaanna aan kuu tuso geedi socodka miisaanka. Halkan waxa ah waxa aad u baahan tahay inaad sameyso:
Ka dhig ololahaaga guud ee SEO in ay ku dhex wareegaan user-ka oo keliya - marka hore iyo ugu horreyn. Dhamaan waxaad u baahan tahay inaad xasuusnaato in Google uu u aqoonsanayo dhab kasta oo gadaal "cod". "Habkaasi, dhammaanba waxaad u baahan tahay halkan si aad u hesho codad badan" tayada "oo dheeraad ah sidaa darteed arin kasta oo gaar ah oo blogka ah ee dib u noqoshada noqda mid faa'iido leh.
Diirad saarista tayada, ma aha tiro
Looma baahna in la yiraahdo wax kasta waa in si caadi ah loo qabtaa,. Haddii kale, waxqabadka oo dhan waxaa loo turjumi doonaa Google sida spam ama nooc khalkhal gelin ah. Habkaa, xusuusnow - qallal-gelinta looma oggola halkaan, sida xitaa kelmadaha blog-ka ah ee dib-u-dhajinta meel kale oo internetka ah ay dhici karto in ay waxyeelo u geystaan ​​darajadaada.
Xoggagaaga Ka Joog Jooji
Sidaan horeba u sheegay, samaynta qaddarka qashinka ee qashinka aan waligaa ku heli doonin meel kasta. Waxaan loola jeedaa in habka kaliya ee lagu sameyn karo website-kaada ama blogka uu yahay koritaanka waa inuu hogaamiyo hogaanka iyo tartankiisa ka baxo. Iyada oo la tixgelinayo faallooyinkaaga 'fekerka' ee bogga dambe, waxaan kugula talineynaa inaad hubiso inaanad haysan wax khaas ah. Sidaa daraadeed, ha ka waaban inaad kantaroosho cilmi baaris dhamaystiran mar kasta oo aad ka faalloodto si aysan waligeed u lahaan doonin shakhsiyad ama qoto dheer. Sidoo kale, waa inaad noqotaa hal-abuurnimo oo had iyo goor diyaar u ahaato in alaabtu ay hoos u dhigto kuwa kale (oo ay ku jiraan kuwa ku tartamaya dhabta ah iyo kuwa la tartamaya).
Ka dib oo dhan, ha ilaawin inaad tixgeliso siyaabo kale duwan ee aad ufadhigaaga ka baxsan marka laga hadlayo faallooyinka blog. Waxaan ula jeedaa in ay jiraan fursado kale oo badan oo ay ku kasbadaan isku xirnaanta, sida qoraallada martida iyo qoraallada marmar, ama xitaa jadwalkaaga taagan Source .